सिङ्गापुरमा बस्ने यी नेपाली युवतीले फेसबुकमा मुस्लिम युवकसंग प्रेममा पर्दा शारीरिक सम्पर्क देखि १ करोड डुब्यो ! अहिले हारगुहार गर्दै मिडियामा आएर यसो भनिन (भिडियोसहित हेर्नुहोस) - Nepali Sandes
सिङ्गापुरमा बस्ने यी नेपाली युवतीले फेसबुकमा मुस्लिम युवकसंग प्रेममा पर्दा शारीरिक सम्पर्क देखि १ करोड डुब्यो ! अहिले हारगुहार गर्दै मिडियामा आएर यसो भनिन (भिडियोसहित हेर्नुहोस)
काठमाडौं । दुई वर्ष अघि सुनिता काफ्ले ‘२८’ सिंगापुरमा थिइन् । अनविटन समीर नामक फेसबुक आइडीबाट उनलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गयो । उनले स्वीकार गरिन् । फेसबुकमा अनविटन समीर भनिने भैरहवाका समीर हुसैन मुसलमान रहेछन् । दुवैले एक अर्कोसँग फेसबुकमा कुराकानी गर्न थाले । आत्मियता बढ्दै गयो । त्यसको केही समयपछि सुनिता नेपाल आइन् । समीरसँग भेट भयो । उनीहरु प्रेममा परिसकेका थिए ।
धर्मले दुईलाई रोक्न सकेन । भेटकै क्रममा समीरले सुनितालाई औपचारिक प्रेम प्रस्ताव गरे । सुनिताले बाबुको उपचारमा व्यस्त छु भनिन् । त्यो क्रममा सुनिताका पिताको स्वर्गवास भयो । समीरसँग फेरि भेट भयो । समीरले फेरि सम्बन्धमा बस्न आग्रह गरे । सुनिताले पनि स्वीकार गरिन् ।
Sat-May-2018, 02:09 pm मा प्रकाशित, 61 जनाले हेर्नुभयो
पोखराबाट आयो यस्तो खबर ! पाता कसेर जेल नहालेर के हेर्दै छ ओलि सरकार ?
निशानले एलिशालाई ‘भुन्टी’ बनाएपछि..